ट्रेन्ट बोल्टको ह्याट्रिकले न्यूजिल्याण्ड विजयी (भिडियो सहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ट्रेन्ट बोल्टको ह्याट्रिकले न्यूजिल्याण्ड विजयी (भिडियो सहित)
एजेन्सी । न्युजिल्यान्डले पाकिस्तानविरुद्धको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा जित हासिल गरेको छ ।बुधबार राति भएको पहिलो एकदिवसीयमा न्युजिल्यान्डले पाकिस्तानलाई ४७ रनले हराएको हो ।
युएईको आबुधाबीमा न्युजिल्यान्डले दिएको २६७ रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले ४७ ओभर २ बलमा अलआउट हुँदै २१९ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
ट्रेन्ट बोल्टले ह्याट्रिक विकेट लिएपछि पाकिस्तानले पुरै ओभर खेल्न सकेन् । पाकिस्तानका लागि कप्तान सर्फ्राज अहमेदले ६४ तथा इमाद वासिमले ५० रनको अर्धशतकीय इनिङस खेलेपनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन् । यस्तै इमाम उल हकले ३४ तथा सोएब मल्लिकले ३० रन जोडे ।
पाकिस्तानलाई सस्तैमा समेट्न बोल्टले दोस्रो ओभरमै ह्याट्रिक विकेट लिएका थिए । बोल्टले दोस्रो ओभरको दोस्रो बलमा फखर जमान, तेस्रो बलमा बाबर आजम र चौथो बलमा मोहमद हाफिजलाई आउट गर्दै ह्याट्रिक विकेट लिएका थिए । जमानले १ रन जोड्दा आजम र हाफिज सुन्य रनमा बोल्टको शिकार बनेका थिए ।
यस्तै न्युजिल्यान्डका लक्की फेर्गुसनले पनि ३ विकेट लिदा कोलिन डी ग्रान्डहोमको नाममा २ विकेट रह्यो ।
यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले पुरै ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २६६ रन जोडेको थियो । न्युजिल्यान्डका लागि रोस टेलरले ८० रनको अर्धशतकीय इनिङस खेल्दा टम लाथमले ६८ रनको योगदान गरे ।
त्यस्तै कोलिन मुन्रोले २९ रन जोड्दा कप्तान केन विलियम्सनले २७ रन जोडे । पाकिस्तानका साहिन साह अफ्रिदी र सहदाब खानले ४/४ विकेट लिए ।
यो जितसंगै न्युजिल्यान्डले ३ खेलको एकदिवसीय सिरिजमा १ - ० को अग्रता बनाएको छ ।